Rugta ganacsatada oo soo ban dhigtay cawaaqibka dhaqaale ee ka dhashy xayiraada Jubbaland – Hornafrik Media Network
Rugta ganacsatada oo soo ban dhigtay cawaaqibka dhaqaale ee ka dhashy xayiraada Jubbaland
Guddoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland Shaafi Raabi ayaa sheegay in ganacsatada Jubbaland iyo shacabka ku nool deegaanadaas ay khasaareen hanti badan arrintaa ay u baahan wax ka qabasho.
Guddoomiye Shaafi ayaa khasaaraha hantidaas ku sheegay inay ka dhalatay xayiraaddii ay saartay dowladda Soomaaliya maamulka Jubbaland.
War qoraal ah oo ay soo saareen ruggta ganacsiga Jubbaland ayay kusoo bandhigeen hantida ka qasaartay shacabka reer Jubbaland kuwaa oo loo diray labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya si ay wax uga qabtaan.
Qoraalka ay soo saareen rugta ganacsiga Jubbaland ayey ku dalbadeen in xayiraada laga qaado shacabka reer Jubbaland oo xiligaan wajahaya xaalad cakirnaan ah, iyagoo dalbaday in waxii siyaasad ah aysan salfan shacabka ku nool deegaanada uu ka arimiyo maamulka Jubbaland.
Horay ayaa siyaasiyiin iyo wax garad uga hadlay xayiraada la saaray deegaanada Jubbaland ee dhan hawada ah waxa ay ka digeen hadii aan waxlaga badalin inay ka dhalan karto cawaaqib xumo aan la mahdin.
Wasiir Sadiiq Warfaa oo khudbad ka jeediyay shir ka socda Geneva
Dowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay askar Faransiiska uga dhimatay Maali